Idei mmiri ma na Jakarta ( Jabodetabek ) ~ Jasa SEO Murah, Berkualitas, Prefesional Dan Bergaransi
06.17 Juragan Channel
Idei mmiri ma na Jakarta ( Jabodetabek ) bụ n'oge gara aga. Otu n'ime ihe nke a pụrụ amịpụtara si idei mmiri bụ ùgwù nke mkpa revitalization ọtụtụ ebe ahụ, na-eme ka drainage kanaal ( iju mmiri ọwa ) na n'ichepụta njigide .
Ma mbubreyo ka bara uru na- ghọtara na enyịme ke ini emi mmepe na na tọghata ugbo ala Jabodetabek na mpaghara na-enwSanaPoker.com JUDI POKER, AGEN POKER, AGEN JUDI POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA SARANAPOKER.COM AGEN TEXAS POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYAeghị ihe ọnwụ nke ọrụ n'ime ugbo ala.
Otu n'ime ọrụ n'ime ugbo ala bu mmiri ozuzo na mmiri nwa oge n'ụlọnga , sook na igbapu ndammana si upstream ka downstream watershed (nke fulcrum mmiri ).
Ntughari nke ugbo ala na-enweghị ihe ọnwụ nke prop ga- a idei mmiri nke mmiri na mpaghara nwere ikike idi ihe ma dissipate obere oké mmiri ozuzo , mgbe ole oké mmiri ozuzo na- dịtụ ofu , karịsịa ma ọ bụrụ na ụba.
Idei mmiri na Jakarta na obodo ndị ọzọ , dị ka mgbe idei mmiri na Bale Endah na Dayeuh mgbanwe na gburugburu Bandung Regency ka mgbe etịbe ke Obio tokyo , Japan ke 1990s ruru ka ulo oru mmepe na -efu nke osikapa n'ubi gburugburu n'afo 1980 ( Nishio 1999 ). Ebe ọ bụ na ka oge na-aga Japanese Gọọmenti iji chebe ugbo ala , karịsịa paddy n'ubi ụzọ dị iche iche .
Japan bu mepụtara na obodo bara ọgaranya. Ma usoro oru ugbo , karịsịa paddy ubi nke na govamenti na ndị Japan nnọọ mgbanwe . Japan pushes maka free ahia commodities osikapa . Japan eresi ndi oru ugbo na-ere ọka osikapa 285 yen kwa n'arọ ( Rp 22.800/kg ) na osikapa na na 350-400 yen kwa n'arọ ( Rp 30.000/kg ).
Tụnyere ndị ahịa mba na mba na ahịa ( FOB Thailand ) price eresi ke Japan ndị ọzọ dị oké ọnụ ugboro 10 . Ochichi na ndị Japan na-echebe eresi ndi oru ugbo na ala ubi mgbe " kpụ ọkụ oké ifufe " mba osikapa ahịa dị iche iche , dị ka nnukwu onye osikapa ibubata tax , enyemaka ma ọ bụ kpọmkwem ego na ndị ọrụ ugbo , na ndị ọzọ .
Kasị economists , gụnyere Indonesia Economist ga- atụle extravagant Japan aha otutu adighi ike . Gịnị mere m nsogbu ịmụta osikapa na ya , ma ike cornering Japanese eresi na mba ahịa , ga -adị ọnụ ala karịa? Ya ezi Japanese ede uri philosophize ka Khairil Anwar chọrọ ibi ndụ otu puku afọ , dị iche iche na nkà ihe ọmụma economists ka Keynes kwuru na " n'ikpeazụ anyị nile bụ ndị nwụrụ ." Japanese nwaa adịghị mkpụmkpụ - okwu uru , ma, nke ogologo oge nke mba ndị metụtara .
Nchegbu maka nchedo nke osikapa ubi Japan bụ ịtụnanya . Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị anọ n'elu 10 emepụta eresi , mgbe Indonesia ke usoro 3 ke China ma India, Japanese ọsụ ụzọ tinyere South Korea na China jụrụ uwa ije nke na- ebu site mba mepere emepe na ( OECD ) iji belata acreage eresi paddy nọ n'ógbè ahụ Asia n'ihi na ihe nke methane umu anwuru .
SenangPoker.com Agen Judi Poker Online Terpercaya Indonesia United States , otu n'ime mba mepere emepe na bụ mmadụ abụọ kpọrọ àgwà , ọbụna -enyo anyị enyo nke paddy . Olu -adabere na osikapa n'ubi dị ka isi iyi nke methane anwuru , ma na United States -echebekwa ya eresi ndi oru ugbo na enyemaka nke Rp 5.000/kg .
Ntak emi emekpala AS akuku osikapa ma osikapa abụghị isi nri ndị mmadụ? N'akụkụ nke ọzọ nke Uncle Sam ama ụtọ na-ere osikapa na a dị ọnụ ala karịa price ke mba n'ahịa. O nwere ike ịbụ , Japanese nri jelii ele US ndoro-ndoro ochichi . N'ezie, mba mepere emepe dị ka United States, nke ukwuu konsen nri nche maka ndị mmadụ, ma na-agbalị jidere ụwa nri n'ahịa.
Na paradigm na- ebu na -agbachitere Japanese osikapa paddy ugbo bụ multifung - si . Ala oru ubi , karịsịa osikapa kweere ka a nso nke na ọrụ na- erite uru , ma n'ihi na elu ugwu nke biophysical , aku na uba , na-elekọta mmadụ , omenala , ma ọ bụ mba resilience .
Ke ot osikapa ubi anya dị nnọọ ka paddy cultivation , palawija , na anụ ụlọ ( karịsịa azu ).
Ọka , ọka ma ọ bụ iyak mepụtara site na osikapa paddy ( marketable ibu ) jiri kpọrọ ihe dabere na ahịa usoro , ma n'ahịa bụ ike amata na gburugburu ebe obibi uru ọrụ , na ọdịdị nke ọrụ ma ọ bụ ngwongwo ikemeke ahịa ( na-abụghị marketable ibu ).
Dị ka ihe atụ , ruo ihe dị ka 100 ụbọchị na mgbakwunye na nke cultivation eresi na ọka mkpụrụ 4-5 tọn / ha eresi paddy nakwa mepụta oxygen 17,8 ton / ha ma banye carbon dioxide 24,4 ton / ha ( SEO na Ho - Seong , 2004 ).
Market usoro pụrụ nanị enwetaghị ọka , ma oxygen na carbon dioxide na-emepụta na- etinye obi gị dum lapse nke ikpe. N'ụzọ doro anya, n'ihi na nke a ka anyị nye ala ahịa nke ugbo na ngwaahịa , karịsịa ọka .
N'ihi na ala Fim Bụ Maka n'ihi na anụ ụlọ ọrụ ugbo n'ime ọrụ unattractive , mpako ma alihfungsi ( akakabarede ) nke ugbo ala. Dị ka ihe atụ , n'ihi na n'afọ 1999-2002 a akakabarede eresi paddy karịa 0,56 nde ha na N'ihi e nwere ụfọdụ uru na- efu.
Uru furu efu n'etiti 2,7 nde tọn osikapa emeputa mmiri ịgakwuru maka enyemaka nwere nke 526 nde M3 si otú a bụrụ ihe idei mmiri na downstream mba n'ihi ego mmiri apụghị ijide ọzọ ugbo ala ( n'ókèala ).
Weere ịda n'ụdị superficiality Mmiri ( karịsịa osimiri ) nke na -achọ dredging , enweghị ọrụ , karịsịa na obodo gburugburu 600 -700 puku ituBola.com JUDI BOLA, AGEN BOLA, AGEN JUDI BOLA PIALA DUNIA.
Ọnwụ ma ọ bụ enweghị osikapa Production na mpaghara ka nwere ike imeri nso -eweta eresi si ná mpụga obodo ma ọ bụ ihe dị , ma na ọnwụ ma ọ bụ mmebi n'ihi nke akakabarede ọrụ n'ime eresi n'ubi n'ógbè , ikemeke dochie anya ọhụrụ ebipụta n'ubi ndị ọzọ na mpaghara . N'otu aka ahụ , nsogbu nke na-enweghị ọrụ n'ime ime obodo ndị Java ruru ka ibu - ọnụ ọgụgụ akakabarede ubi na- anaghị adị mfe ịkwụsị site n'ibi ọhụrụ n'ubi ke Papua .
Ọnụ ọgụgụ uru ọnwụ na / ma ọ bụ mmebi ahụhụ ga- esiwanye ibu site n'afọ ruo n'afọ n'ahịrị na ọnụego nke paddy ala akakabarede iketịbe ke isua ke oro ebede . Nke ahụ bụ ọdịdị nke cumulative metụtara ala akakabarede eresi n'ubi ka ibelata Production , ụkọ ọrụ na emebi gburugburu ebe obibi .
Obụp mi njigide nke n'ichepụta ke Bogor maka njikwa nke oke idemmiri Jakarta na ndị gbara ya gburugburu bu isi a mbubreyo uyarade nke elu ugwu nke ọrụ nke ugbo ala , karịsịa paddy n'ubi ke ukwọ ibelata .
Gbara ya gburugburu osikapa paddy dike nwere ike hụrụ dị ka obere ìgwè ndị a dam - dam ma ọ bụ mmiri retaining ponds (mmiri njigide Ponds ) bụ ndị bara uru maka iju mmiri ibelata . Mmiri ozuzo na- emeere otuonye ke nkebi - map n'ubi na- ebute site ná ma ọ bụ secreted nwayọọ nwayọọ ghọọ osimiri ozu na downstream ebe ruo mgbe ihe ize ndụ nke idei mmiri nwere ike belata .
Iju Mmiri ibelata ọrụ nke paddy ala enwetara elu ekele nke gomenti na ndị Japan. Nke a nwere ike hụrụ si obodo ọchịchị aka ndi oru ugbo na ụdị osikapa paddy kpọmkwem ego ( kpọmkwem ugwo ) nke US $ 3.300/ha/tahun ma ọ bụ n'ala akọrọ , ndi oru ugbo nke United States $ 500-1500 / ha / afọ dabere ná mkpọda nke ala ha ( MAFF 2001 ).
Ọzọkwa, ndị obodo ahụ ma ọ bụ na -asị downstream watershed ke Japan njikere akwụ nso nke ugbo ọrụ. Nsonaazụ Yoshida na Goda (2001) usoro CVM ( nkeji valueshion usoro ) gosiri Japanese otu dị njikere iji kwụọ ụgwọ buru ibu ọrụ nke ugbo ala n'ime 72 623 yen / ezinụlọ / afọ ( karịa USD 5 nde ) iji ugbo ala , karịsịa osikapa nọgidere .
N'ịhụ ọdịdị nke gburugburu ebe obibi metụtara ala akakabarede ugbo , akpan akpan osikapa nwere ike kwuru na osikapa ala ntughari -eme nwere ike dị mkpa metụtara na gburugburu ebe obibi.
Njirimara nke gburugburu ebe obibi mmetụta mere site na ntughari eresi paddy izute Isi nke ịrịba mmetụta ibiere Bapedal Ọ 56 nke 1994. Dị ka ihe mkpata maka gburugburu ebe obibi nke metụtara nchigharị eresi paddy ga cumulative , ọ bụghị reversible ( irreversible ), na-agba nọgidere , na multikom - Ponen ma ọ bụ multiaspek gburugburu ebe obibi.
Ndabere nke ndị a anyị na -arụ ọrụ atụmatụ nke nchigharị nke ugbo ala , karịsịa paddy atụmatụ kwesịrị ịgụnye eme ihe ndị na chọrọ ihe EIA .
State Minista Environment edere na Nke 11 2006 banyere ụdị Business Atụmatụ na / ma ọ bụ ọrụ nke Dị Mkpa atụmatụ Analysis na gburugburu ebe obibi mmetụta ( EIA ) a -anọchi nke Minista State maka gburugburu ebe obibi Mkpebi Nke 17 nke 2001 na otu ihe chọrọ ka e degharịrị ịnabata ihe ahụ.
Ịtụle akakabarede eresi paddy bidoro na mgbanwe na mpaghara gbasara ohere atụmatụ ( RTRW ) mgbe mbụ pemerintahlah iwepụta ejizi gburugburu ebe obibi metụtara nke ahụ nwere ike ibili n'ihi nke akakabarede eresi paddy .
Poker757.com Agen Judi Poker Online Terpercaya Indonesia Gburugburu ebe obibi metụtara nke kwesiri ibu isi nwere mmasị na- emetụta akụkụ nri n'obi iru ala, oru na ego , ndi oru ugbo na agbanwe ime obodo bi , mgbanwe na mmiri mgbasa obodo , na ọzọ.
Ka eligibility iwu n'ihi na mkpokọta nke EIA n'ime paddy ala ntughari -eme nwere ike na a ga- eme na gburugburu ebe obibi mmetụta nke mmiri nke gburugburu ebe obibi pụrụ kwara , minimized , ma ọ bụ na ihe nile . Na-abụghị nke osikapa paddy nwere ike ẹkedọhọde dị ka oke .
Nke a kwesịrị ije ozi dị ka ihe ndị na obodo ndị dị n'otu ma ọ bụ karịa nke watershed , dị ka Bandung , Semarang , Mmegide , na ndị ọzọ .
Ndị bụ doctoral oghere mmeri ke Management Studies Mmemme Mmadụ Resources na gburugburu ebe obibi , IPB , Bogor
Ha'aretz : Ikpeazụ gbanwetụrụ : 23/02/07Isi Iyi : http://danielpinem.wordpress.com/pemikiran-indonesia-februari-2007-2/Iju Mmiri ibelata ọrụ nke paddy n'ubi Lahan Citarum DAS
Iju Mmiri ibelata arụ nke Paddy Ubi ke Citarum River bezin
Plastic surgery Tala'ohu , S. Sutono , na F. Agus , Ala Research Institute , Bogor